Research ethics are essential to conducting any research, assessment or evaluation. While researching in the field, we will no doubt face at least some ethical issues. In Myanmar, it is believed that many researchers undertake ethical research.
But with the increasing number of development aid and projects in Myanmar, there has beenagrowing number of researchers, research firms and consulting agencies, andahigher risk that ethical practices are not being followed.
It should be very easy to apply research ethics. But in my experience, many aspects are overlooked.
So to what extent are researchers or evaluators or enumerators respecting research ethics when conducting research activities? What are the implications if researchers do not seek to properly apply research ethics standards?
Although almost all researchers are aware of research ethics, the practical application of research ethics is variable. Perhaps, the understanding of research ethics will be varied between well-experienced researchers, evaluators, newly recruited enumerators and experienced enumerators, individual freelancers and reputable research firms.
So researchers must be aware of the ethical issues at all times. Research ethics such as informed consent, honesty and respect, do no harm principles, and neutrality are widely used. With regards to informed consent, respondents are being asked at the first instance whether they agree to participate in the interview. However, some researchers seem to be forgotten to inform to the communities that they are also free to withdraw from the meeting at any time.
Community members should be well informed about the primary purpose of the research, timeframe, research questions to be covered, confidentiality and privacy of the given information, approval for taking photos and audio recording. Researchers would introduce the overall aims of the research. But to some extent, people did not seek permission before taking photos. Also, some researchers did not explain that interviewees also have the right to leave the interview. With that in mind, we have an ethical responsibility that respondents are free to participate in such research and also have the options of the right to withdraw from the research interviews if they do not wish to continue anymore.
Researchers at all times must be honest about any research actions and intentions. Researchers must respect local cultures, any individuals, privacy, free and informed consent (for example, seeking permission and agreement for taking photos, audio recording), and more importantly, the confidentiality of respondents. Researchers have to be very careful about local culture and to avoid expectations from respondents. For example, researchers should not conduct an interview when villagers are busy with their local activities, harvesting time, for instance. Researchers should keep focused on the elements of research actions rather than trying to be completed the interview by ticking the box.
3. Neutrality and do no harm principles
Researchers must remain neutral. Researchers also need to ensure not to have any biases of respondents as well as researchers views to influence in any discussions. I have seen that some researches even asked leading questions to villagers and influenced the discussions. Researchers should not create any expectations at all from the outcomes of the study. Researchers must not influence interviews and should remain as neutral and objective as possible, while ensuring they do not cause any tensions. Researchers are responsible not to cause any harm to the respondents and communities throughout the research. For example, harm includes not only physical harm but also emotional and social harm.
Therefore, we researchers must be aware of, adhere to, respect and follow research ethics at all times when conducting research.
သုတေသနဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်များသည် မည်သည့်သုတေသနလုပ်ငန်း၊ ဆန်းစစ်လေ့လာမှု သို့မဟုတ် အကဲဖြတ်သုတေသနလုပ်ငန်းများတွင်မဆို အလွန်အရေးပါ ပါသည်။ သုတေသီများအနေဖြင့် ကွင်းဆင်းသုတေသနလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်စဥ်တွင် သုတေသန ဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်များနှင့် ပါတ်သက်သော အခက်အခဲများကို အနည်းဆုံးတော့ ကြုံတွေ့ရလိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ များစွာသောသုတေသီများသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း သုတေသန ဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်များကို ကျင့်သုံးကြမည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။ သို့သော်ငြားလည်း များပြားလာသော နိုင်ငံတစ်ကာ အကူအညီများ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ၊ စီမံကိန်းများ နှင့်အတူ သုတေသီများ၊ သုတေသနလုပ်ငန်းများ နှင့် အကဲဖြတ်သုတေသနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ လည်းတိုးပွားလာပါသည်။ ဤသို့သုတေသီများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ များပြားလာသည် နှင့် အမျှ သုတေသနဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်များအပေါ် သေချာစွာကျင့်သုံးလိုက်နာမှုတွင် စဥ်းစားစရာ ဖြစ်လာပါသည်။
သုတေသနဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်များအပေါ် လိုက်နာမှုသည် အလွန်ပင်လွယ်ကူသည်ဟု ထင်ကောင်းထင်ရပါသည်။ သို့ရာတွင် စာရေးသူအတွေ့အကြုံအရ များစွာသော သုတေသနဆိုင်ရာကျင့်ဝတ် အချက်များသည် သတိမမူဖြစ်တတ်ပါသည်။ စဥ်းစားစရာ ရှိသည်မှာ သုတေသီများ သို့မဟုတ် အကဲဖြတ်သုတေသနလုပ်သူများ သို့မဟုတ် သုတေသနလုပ်ငန်းလုပ်ရာတွင် အချက်အလက်ကောက်သူများ၊ စစ်တမ်းကောက်ယူသူများ သည် သုတေသနလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရာတွင် ၎င်းကျင့်ဝတ်များကို မည်သည့်အတိုင်းအတာအထိ လိုက်နာကျင့်သုံးသနည်း ဆိုသည့် အချက်ပင်ဖြစ်သည်။ နောက်ထပ်စဥ်းစားစရာြဖစ်သည့် အချက်မှာ အကယ်၍များ ၎င်းသုတေသနဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်များကို သေချာစွာလိုက်နာမကျင့်သုံးနိုင်ပါက သုတေသနလုပ်ငန်း နှင့် ပါတ်သက်သောလုပ်ငန်းများ၊ ရလဒ်များအပါ် မည်သည့် ဂယက်ရိုက်ခတ်မှုများ ရှိသနည်းဆိုသည့် အချက်ဖြစ်သည်။
အားလုံးသောသုတေသီများသည် သုတေသနဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်များကို ကောင်းစွာသိ၍ လိုက်နာကျင့်သုံးကြမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း တစ်ကယ်တမ်း လိုက်နာရာတွင် သုတေသီများ၏ အတွေ့အကြုံပေါ် မူတည်၍ တစ်ဦး နှင့် တစ်ဦး ကွဲလွဲနိုင်ပါသည်။ သုတေသနဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်များကို နားလည်နိုင်မှုသည် အတွေ့အကြုံများစွာရှိသောသုတေသီများ နှင့် အတွေ့အကြုံနည်းသော သုတေသီများကြား၊ အကဲဖြတ်သုတေသီများ၊ တစ်ဦးခြင်းလွတ်လပ်စွာရပ်တည်သော သုတေသီများ၊ နာမည်ကောင်း နှင့် အတွေ့အကြုံများစွာရှိသော သုတေသနလုပ်ငန်းအဖွဲ့များ အပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြားမှု ရှိနိုင်ပါသည်။
ယင်းကြောင့် သုတေသီများအားလုံးသည် သုတေသနဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်များကို အမြဲသတိရှိရှိကျင့်သုံးရန် လိုအပ်ပါသည်။ သုတေသနဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်များဟုဆိုရာ၌ ဥပမာ ဖြေဆိုသူ၏ သဘောတူခွင့်ပြုချက်ရယူခြင်း၊ သုတေသနလုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်သည့်သူများအပေါ် ရိုးသားမှု နှင့် ရိုသေလေးစားမှု၊ သုတေသနလုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်သည့်သူများ ထိခိုက်မှုမရှိစေရေး နှင့် ဘက်လိုက်မှုမရှိစေရေး စသည်တို့မှာ ကျယ်ပြန့်စွာ ကျင့်သုံးကြပါသည်။ ဥပမာ သုတေသီများသည် ဖြေဆိုသူ၏ သဘောတူခွင့်ပြုချက်နှင့် ပါတ်သက်လျှင် သုတေသနလုပ်ငန်းစဥ်တွင် ပါဝင်ဆွေးနွေးနိုင်ရန် သဘောတူ၊ မတူကို ပထမဦးစွာမေးပါသည်။ သို့သော်ငြားလည်း ယင်းသုတေသနလုပ်ငန်းစဥ်တွင် ပါဝင်ဆွေးနွေးရန် သဘောတူထားသည့် ဖြေဆိုမည့်သူများသည် ဆွေးနွေးနေစဥ်တွင်သော်လည်းကောင်း သို့မဟုတ် မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို ၎င်းတို့ ဆက်လက်ပါဝင်ဆွေးနွေးရန် ဆန္ဒမရှိပါကလည်း အချိန်မရွေး ထွက်ခွာပိုင်ခွင့်ရှိသည်ကို သုတေသီများမှ ၎င်းတို့အား သေချာရှင်းပြရန် မေ့လျော့နေသည့် သုတေသီများလည်း ရှိနိုင်ပါသည်။
၁။ ဖြေဆိုသူ၏ သဘောတူခွင့်ပြုချက်ရယူခြင်း
သုသေတီများသည် သုတေသနလုပ်ငန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်၊ သုတေသနလုပ်ငန်း၏ အချိန်အတိုင်းအတာကာလ၊ သုတေသန နှင့် ပါတ်သက်သည့် အဓိကမေးခွန်းများ၊ လျှို့ဝှက်သိမ်းဆည်းထားမှု နှင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ နှင့် ဖြေဆိုမှုများကို လုံခြုံစွာသိမ်းဆည်းထားမှု ၊ ဓါတ်ပုံရိုက်မည်ဆိုပါကလည်း ကြိုတင်ခွင့်တောင်းမှု နှင့် အသံဖမ်းစက်ဖြင့် အသံသွင်းမည်ဆိုပါကလည်း ကြိုတင်ခွင့်တောင်းမှု စသည်တို့ကို သုတေသနလုပ်ငန်းစဥ်တွင် ပါဝင်ဖြေဆိုမည့် မည်သူကိုမဆို သေချာစွာ ပြောဆိုရှင်းပြရန် လိုအပ်ပါသည်။ သုတေသီများသည် သုတေသနလုပ်ငန်း၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကို ခြုံငုံရှင်းပြ၍ အစပြုကြလေ့ရှိပါသည်။ သို့သော်အခြေအနေအချို့တွင် သုတေသီများသည် ဓါတ်ပုံရိုက်ရန်အတွက် ကြိုတင်ခွင့်တောင်းမှုကို ပြုလုပ်ရန် မေ့လျော့နေတတ်ပါသည်။ ယင်းအပြင် အချို့သော သုတေသီများကလည်း ဖြေဆိုသူများ ဆက်လက်ပါဝင်ဆွေးနွေးရန် ဆန္ဒမရှိပါကလည်း အချိန်မရွေး ထွက်ခွာပိုင်ခွင့်ရှိသည်ကို ပြောဆိုရှင်းပြခြင်း မပြုလုပ်ကြပါ သို့မဟုတ် မေ့လျော့နေတတ်ပါသည်။ ဤအကြောင်းအရာများကို သတိမူ၍ ကျွှန်တော်တို့သည် သုတေသနဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်များကို လိုက်နာရန်အတွက် တာဝန်ရှိပါသည်။ ဖြေဆိုမည့်သူများသည်လည်း သုတေသလုပ်ငန်းအတွက် ပါဝင်ဆွေးနွေးနေစဥ်တွင်လည်း ၎င်းတို့ ဆက်လက်ပါဝင်ဆွေးနွေးရန် ဆန္ဒမရှိပါက မည်သည့်အချိန်မဆို ထွက်ခွာပိုင်ခွင့်ရှိသည်ကိုလည်း ရှင်းပြရန် ကျွှန်တော်တို့တွင် တာဝန်ရှိပါသည်။
၂။ သုတေသနလုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်သည့်သူများအပေါ် ရိုးသားမှု နှင့် ရိုသေလေးစားမှု
သုတေသီများသည် သုတေသန နှင့် ပါတ်သက်သော လုပ်ငန်းများနှင့် ရည်ရွယ်ချက်များအပေါ် အချိန်တိုင်း ရိုးသားမှုရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ သုတေသီများသည် သက်ဆိုင်ရာ သုတေသနလုပ်ရာ နေရာဒေသ နှင့် ပါတ်သက်သော ယာဥ်ကျေးမှု၊ မည်သည့်တစ်ဦးခြင်းပုဂ္ဂိုလ်မဆို၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို လျှို့ဝှက်သိမ်းဆည်းထားမှု၊ ဖြေဆိုသူ၏ လွတ်လပ်စွာပါဝင်မှု နှင့် သဘောတူခွင့်ပြုချက် (ဥပမာ အင်တာဗျူးအတွက် အသံဖမ်းယူ မှတ်တမ်းတင်ရန် နှင့် ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်းတင်မှု)၊ အထူးအရေးကြီးသည်မှာ ဖြေဆိုသူ၏ အချက်အလက်များလျှို့ဝှက်သိမ်းဆည်းထားမှု တို့ဖြစ်ပါသည်။ သုတေသီများသည် သုတေသနလုပ်ရာ နေရာဒေသ နှင့် ပါတ်သက်သော ယာဥ်ကျေးမှုတို့ကို သေချာနားလည်ရန် နှင့် ဖြေဆိုသူများမှ ဤသုတေသနလုပ်ငန်းစဥ်မှ ရရှိလာမည့် မည်သည့်အကျိုးအမြတ် တစ်စုံတစ်ရာကိုမျှ မျှော်ကိုးပြီး သုတေသနမျိုးကို မဖြစ်စေရန်ကိုလည်း ရှောင်ကျဥ်သင့်သည်။ သုတေသီများအနေဖြင့် ရွာသူရွာသားများသည် ၎င်းတို့၏လုပ်ငန်းများဖြင့် အလုပ်များနေချိန်တွင်သော်လည်းကောင်း (ဥပမာ စပါးရိတ်သိမ်းချိန်) စသည့်အချိန်အခါမျိုးတွင် သုတေသန လုပ်ငန်းကို မပြုလုပ်သင့်ပေ။ ရွာသူရွာသားများမှ ၎င်းတို့ ပေးနိုင်သည့်အချိန်၊ အားလပ်သည့် အချိန်တွင်သာ သုတေသနကို ပြုလုပ်သင့်သည်။ သုတေသီများအနေဖြင့် သုတေသနလုပ်ငန်းစဥ်များ မြန်ဆန်စွာပြီးမြောက်ရေးထက် သုတေသနလုပ်ငန်း၏ အဓိကလိုအပ်ချက်အတွက်သာ အာရုံစိုက်သင့်ပြီး လုပ်ဆောင်သင့်ပါသည်။
၃။ သုတေသနလုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်သည့်သူများ ထိခိုက်မှုမရှိစေရေး နှင့် ဘက်လိုက်မှုမရှိစေရေး
သုတေသီများသည် သုတေသနလုပ်ရာတွင်ဘက်လိုက်မှုကင်းရပါမည်။ ၎င်းအပြင် သုတေသီများသည် ဖြေဆိုမည့်သူများမှ မည်သည့် အဂတိမျိုးကိုမျှ မရှိအောင် လုပ်ဆောင်ရမည့် အပြင်၊ ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများမှလည်း မည်သည့် လွှမ်းမိုးမှုမျှ မရှိအောင် ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ရွာသူရွာသားများအပေါ် လွှမ်းမိုး၍ အရိပ်ပြမေးခွန်း မေးသည့် သုတေသီအချို့ကိုလည်း စာရေးသူအနေဖြင့် ကြုံတွေ့ဖူးပါသည်။ သုတေသီများသည် သုတေသနလုပ်ငန်းစဥ်မှ ရရှိလာမည့် အကျိုးအမြတ် တစ်စုံတစ်ရာကို မျှော်ကိုးပြီး လုပ်သည့် သုတေသနမျိုး ဖြစ်အောင်လည်း မဖန်တီးသင့်ပေ။
သုတေသီများသည် အင်တာဗျူးလုပ်ငန်းများတွင် လွှမ်းမိုးမှုမရှိစေရန် နှင့် တတ်နိုင်သမျှ ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျကျ နှင့် ဘက်လိုက်မှု မရှိမှသာလျှင် တစ်ဖက်မှလည်း ပဋိပက္ခနှင့် တင်းမာမှုများမဖြစ်အောင် ပိုမိုဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ သုတေသီများအနေဖြင့်လည်း သုတေသနလုပ်ငန်းစဥ်တစ်လျှောက်လုံး ဖြေဆိုသူများအပေါ် မည်သည့်ထိခိုက်မှုမျှ သက်ရောက်မှု မရှိစေရေးအတွက်လည်း တာဝန်ရှိပါသည်။ ဥပမာ ထိခိုက်မှုမရှိစေရေးဟုဆိုရာတွင် ရုပ်ဝတ္ထုပိုင်းဆိုင်ရာသာမက၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာ ထိခိုက်ခြင်းပါ ပါဝင်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် သုတေသီများအနေဖြင့် သုတေသနလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရာတွင် သုတေသနဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်များကို နားလည်သဘောပေါက်၍ အမြဲတစေ စောင့်ထိန်းခြင်း၊ လေးစားခြင်း နှင့် လိုက်နာခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပေသည်။